ATM mari Bank - sei kushandisa?
Mumwe muridzi epurasitiki kadhi tichikufunga kushandisa imwe ATM. Kunyange yokubva mari kana kungoti kuona sei mari yakawanda iri nhoroondo. Ngatimbotaura munyaya ino pamusoro mumari Bank ATMs.
Chii unofanira kushandisa ATM nemari Bank?
Chekutanga - a epurasitiki kadhi. Kana uine kadhi kubva rimwe bhengi, ipapo chigadzirirai mberi chokuti kunyange nokuda oparesheni akumbirwa nepakati uchange mhosva basa. Nokuti vaya vane Sberbank kadhi basa achava wakasununguka.
Kutanga kushandisa ATM nemari Bank kunodiwa kuti dzinoisa kadhi kupinda buri. Inofanira akaiswa nemazvo, zvikasadaro mudziyo hakushande nawo. Zvakakodzera kuyeuka imwe ushe nyore chaizvo: kadhi kuti akaiswa kuti icon of muripo system (semuenzaniso, Visa) riri rezasi rworuboshwe pakona pamusoro divi kadhi. Kamwe zviri akaiswa muruoko ATM nemari Bank, unofanira kusarudza mutauro basa uye kupinda PIN. nyaya yake kuwana kadhi iri rinokosha hamvuropu, uye inoitwa digits mana. Yeuka kuti PIN remitemo rinofanira akapinda nemazvo, sezvo pashure matatu sizvo kuedza kadhi iri makavhara nokuti zuva, asi kana musingadi kurangarira bumbiro wako, uye vakarasikirwa hamvuropu, zvino, Haiwa, iwe kuchinja kadhi. Saka, mushure PIN wakapinda, iwe kune huru ATM Muterere. Ngatimbotaura sei kuvhiya siyana.
Sei kukumbira nepakati?
Kuti vawane umboo pamusoro pezvakaita nhoroondo, tapota tinya bhatani rakanzi "nepakati wobvunzisisa" uye kusarudza chaizvo sei iwe achapiwa nengaidzo - iri check kana chidzitiro. Kamwe unoona mugumisiro, unogona kudzokera huru Muterere, kana kungoti kunhonga kadhi.
Cash withdrawals pa ATMs nemari
ATM ane bhatani "Wana Cash" iri huru Muterere. Nokutsikirira bhatani ichi, iwe uchava kuuyiswa mikana yakawanda kusarudza kubva, kureva chaizvo mari, kana unogona kuenda chikamu "Wana mumwe chitsama" uye kupinda vakawanda uchida. Usakanganwa kuti ATMs anogona kubviswa hapana vanopfuura makumi mana masangano panguva. Bhatani, rine ATM nemari Bank dzingasiyana muzita, nekuti kana munhu ATM ane mashandiro kugamuchirwa mari, risiti uye issuance yaisanganisa mumwe bhatani. Uyewo, usati kupa mari, asi ATM agara vakashamisika zvaunofanira kutarisa kana kwete. Kana cheki kunodiwa, zvakakodzera achizviendesa "Print chionekeso", kana kwete, saka, "Regai kudhinda cheki."
Sei vamwe amabasa?
Sberbank kweRussia (Moscow) rine mirayiridzo chokuita chokupika mamwe akavhiyiwa kuti akafanana mari kurega. Haufaniri chete kusarudza aida chikamu uye kutevedzera mirayiridzo pamadziro. Mushure uri wapedza kushandisa ATM nemari Bank, musakanganwa kunhonga kadhi.
Tinovimba kuti izvi muperekedzi richakubatsira kana achiita kwema mu ATMs uye achava richishanda kwauri.
The rwezvemabhengi kwemauto yayo murau
Nyaya kuchengetedzeka - unhu uye mapatani
Status "Chakagamuchirwa ABS" (mari Bank) - zvinorevei?
Ndezvipi anogamuchira mari nemari? Chinodzinga ngano
Chii BIC of mari Bank, uye apo rinogona kuwanikwa
Mujuru - chii? Apo mujuru kurarama uye chii vakadya?
Cabbage Salad pasina: yakanaka yokubika, kunyanya kubika uye wongororo
Muscovy namachinda ake okutanga
Dissimilation - ichi ... Steps dissimilation
The klassiske yokuwana nayo apirikoti jamhu nedzimwewo
Prague muna October: mamiriro okunze, ongororo yakaitwa zvisakamboonekwa mazano vafambi
Montenegro Canyons Tara uye Moraca. Rafting muna Montenegro
Sei yakachena Windows yokunyoresa?
Ndinoziva sei kuti matanho akawanda vari 1 maira?
Momordica: zvakanakira uye pokukuvadza. ehupfumi momordika
Seneti uye Revafundisi chivako St. Petersburg: wongororo, rondedzero, nhoroondo uye akitekiti
'Levofloxacin' Tablets. Mirayiridzo yokushandisa